Mametraka sy manamboatra Debian Wheezy | Avy amin'ny Linux
petercheco | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, soso-kevitra, Tambajotra / seriver
Anio dia hasehoko anao ny fomba fametrahana ny Debian Wheezy amin'ny KDE satria ny tontolo iainako no tiako sy ny fomba hikirakira azy aorian'ny fametrahana azy.
Avelako ho anao ny sary vitsivitsy:
Sintomy ny kinova DVD an'ny Debian Wheezy:
Aleoko misintona ny kinova DVD satria miaraka amin'ny tontolo graphique rehetra ary tsy mila misintona fonosana na mutation be dia be avy amin'ny Internet ianao .. Izy io koa dia mitondra fifantina fonosana tsara :).
Na eo aza izany dia avelako ho anao ihany koa ireo kinova CD miaraka amin'ny tontolo samihafa:
Izy ireo dia mandoro izany amin'ny CD na DVD arakaraka izay nofidian'izy ireo sy hamerenany. Raha vantany vao manomboka indray izy ireo, ny menio fametrahana an'i Debian toa izao:
Ho an'ireo izay tia ahy dia nisintona ny kinova DVD, mametraka ny tenantsika amin'ny safidy hametraka izahay ary tsindrio ny lakilen'ny tabilaoro mba hampisehoana aminay ireo safidy izay ho entina ary mila ampidirinay eo amin'ny faran'ny tsipika izay miseho fotsiny ity. .: desktop = kde ary kitiho ny enter.
Amin'ity fomba ity dia manamboatra ny tontolo iainana hapetraka amin'ny fomba mivantana isika. Azontsika atao ny mametraka mivantana ny tontolo iainana ao amin'ny Debian anao. Niova ihany izy ireo KDE ny xfce, lxde maha-ohatra: desktop = xfce...
Mazava ho azy fa raha te hampiasa Gnome ianao dia tsy mila manao an'io dingana io satria efa apetrakao amin'ny toerana misy anao ary ireo izay nampidina endrika hafa an'ny kinova CD dia tsy mila manao na inona na inona ary manohy ny fametrahana azy. Raha efa nisintona karazana CD ianao dia tadidio fa tsy maintsy mifandray amin'ny Internet ianao mandritra ny fametrahana azy mba hisintomana anao ny tontolon'ny sary voafantina sy ny fampiharana azy.
Hitohy ny fametrahana ary hapetraka eo amin'ny Debian Wheezy Debit avy hatrany ny KDE.
Raha vantany vao tafapetraka ny rafitra ary manomboka ny fivoriana dia manohy ny fanovana ireo trano fitahirizana toy izao izahay: Manokatra ny terminal izahay ary manoratra:
ampidirintsika ny lisitra root nano root /etc/apt/source.list
Ato amin'ny terminal dia haseho antsika ny atin'ny rakitra sumber.list ary manova azy izahay amin'ny famelana azy
deb http://ftp.debian.org/debian wheezy main contrib non-free deb-src http://ftp.debian.org/debian wheezy main contrib non-free deb http://ftp.debian.org/debian wheezy-fanavaozana ny contrib lehibe deb-src maimaim-poana http://ftp.debian.org/debian wheezy-fanavaozana deba lehibe tsy misy vidiny http://security.debian.org/ wheezy / fanavaozana deba kontribola lehibe tsy maimaim-poana -src http://security.debian.org/ wheezy / manavao ny contrib lehibe tsy misy # # Debian multimedia deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main-debc-src http: //www.deb -multimedia.org wheezy main tsy andoavam-bola
Mitahiry izahay miaraka amin'ny fitambarana manan-danja CTRL + O ary manakaiky ny CTRL + X.
Manohy ny fanavaozana ny distro izahay:
apt-get update apt-get install deb-multimedia-keyring apt-get update apt-get -y dist-fanavaozana
Izahay izao dia mametraka rindranasa fototra miaraka amin'ny mpitantana ny programa APPER izay
hita ao amin'ny menio KDE.
aptitude hametraka icedtea-plugin flashplayer-mozilla kde-config-flash-player icedove icedove-l10n-en-es transmageddon kdenlive gufw kde-config-gtk-style gtk2-engine-oxygen gtk3-engine-oxygen gdebi-kde kde-config- touchpad rar unrar
Vita .. Amin'izany no ananantsika Debian Wheezy KDE voaomana sy miasa tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ampidiro ary ampifanaraho amin'i Debian Wheezy
141 hevitra, avelao ny anao
Hanomana lahatsoratra iray momba ny fametrahana sy ny fikirakirana ny Wheezy sy ny KDE aho (miaraka amin'ny atiny kely kokoa). Hitako izao ary faly aho fa tsy niasa.
Manoro hevitra ihany koa aho ny hametraka qtcurve hanamboarana ireo varavarankely ary hahatratra fampidirana tonga lafatra ny fampiharana qt sy gtk. Ho fanampin'ny fonosana ilaina, cmake, kde-workspace-dev, libxrender-de ary libxext-dev fonosana hanangonana sy hametahana bespin sy xbar. Ireo zavatra ilaina hafa izay tsy raisin'izy ireo velively dia ny preload sy prelink. Ny DKMS dia tsy afaka tsy eo amin'ireo izay mampiasa modules propriétaire.
Preload ampiasaiko izany fa ny prelink dia nanome ahy hadisoana foana rehefa mihazakazaka aho.
Salama ary misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra .. 🙂
Ny fampidirana ireo fampiharana gtk ao amin'ny KDE dia tratra miaraka amin'ireo fonosana kde-config-gtk-style gtk2-engine-oxygen gtk3-engine-oxygen 😀
Ny fitaovana fampandrosoana dia efa raharahan'ny mpampiasa Linux mandroso izay tsy mila milaza intsony ny fomba fametrahana azy ireo: D.
Raha ny hevitro, ny fampidirana tratra amin'ny qtcurve dia tsara kokoa noho ny amin'ny oxygen (izay tsy ratsy mihintsy). Azonao atao ny misintona lohahevitra an-jatony avy amin'ny kde-look, deviantart ary tranonkala mitovy amin'izany na afaka mamorona anao manokana ianao raha manana ny fahalalana. Na dia tsy ilaina aza ny manaingo ny KDE, tsy azoko ny hevitra miasa ao aminy raha tsy misy fanovana mifanaraka amin'ny tsiro sy ny filako. Soa ihany fa afaka misafidy isika.
Mikasika ireo fitaovam-pandrosoana dia ilaina ny hahafahan'izy ireo manangona sy mametraka bespin, izay lasa lamaody indray tamin'ny fisehoan'ny Be :: Shell, nahatratra ny fitambarana tsy voavaha amin'ny fomba mahavariana.
Hatramin'ny nitondran'izy ireo ilay lohahevitra dia manana fangatahana aho: mampiasa e4rat haingana aho mba hanafainganana ny fanombohana, saingy tsy dia mivoatra firy izany. Amin'ny preload sy prelink, mahatsikaritra fanatsarana ve ianao amin'ny fanombohana? Misaotra anao.
Eny, ao amin'ny Debian Wheezy dia tsy manana olana amin'ny ora fampidinana aho. Amin'ny fanombohana sy ny fampiharana ny rafitra dia marihina ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha ankapobeny. Ankehitriny, raha te hampiasa Preload ianao dia afaka mahazo fiakarana 50% amin'ny fotoana fandefasana .. Raha ny lojika dia miankina amin'ny rafitrao izany. Raha manana fikirakirana haingana amin'ny fitaovanao ianao dia tsy hitako fa misy mahasamihafa azy intsony.
Ok, andramako izany. Raha ny tena izy dia mampiasa Kubuntu aho, saingy mampahafantatra ahy amin'ny tenako miaraka amin'i Debian aho ka maka ny sary famantarana Razor-qt (satria Debian no tena izy).
Misaotra amin'ny tendrony sy lahatsoratra tsara.
Eny, eo am-pametrahana an'i Debian amin'ny solosaiko findainy aho izao, fa izao rehefa namaky ity lahatsoratra ity aho dia tsapako fa nanao hadisoana aho: nampidina ny DVD DVD misy gnome aho. ka ho avy izao ny fotoana hamafana azy avy eo ary hametraka iray hafa.
Amin'ny DVD voalohany dia tonga ireo fonosana be mpampiasa indrindra ao anatin'izany ny tontolo iainana KDE, GNOME, XFCE, LXDE, sns.
Raha hametraka tontolo hafa dia safidio ny "desktop hafa" amin'ny écran boot.
Eny tokoa .. Ao amin'ny efijery boot ianao dia mila manao ny dingana voalaza ao amin'ilay lahatsoratra na izay lazain'i Nestor etsy ambony .. 🙂
Misaotra namana noho ny tuto hitako tao amin'ny sofina ary navelako fiatoana kely ho anao ny repos wheianzy stable. Amin'izao fotoana izao dia hamboariko io. Hehehe omaly nampidina sy nametraka azy aho fa nanana asan'ny oniversite aho ary tsy nijanona fotoana hankafizako ny debianako.
Misaotra betsaka amin'ny hevitra sy ny torohevitra 🙂
Raha ny marina dia tsara kokoa ny manondro ireo rohy mankany amin'ireo tahiry
fa tsy mampiasa
satria afaka fotoana fohy dia hamoaka ny kinova 7.0.1 i debian ary tsy ho azo ampiasaina intsony ireo rohy rehetra
Eny Rolo, eo ho eo izao 🙂
Toa tsy azoko tsara ny tiako holazaina, ny tiako holazaina dia ny rohy mankany amin'ny toerana anaovana sary ISO izay apetranao x oh:
afaka fotoana fohy dia tsy ho azo ampiasaina intsony izy ireo rehefa manavao wheezy ho an'ny ohatra 7.0.1
ary ireo mpamaky amin'ny ho avy ity lahatsoratra ity dia ho diso fanantenana satria tsy afaka niditra tamin'ny sary iso
Izay no antony nanehoako hevitra fa tsara kokoa ny manondro ireo tahirinkevitra ankehitriny izay manondro hatrany ilay kinova azo antoka indrindra
AlejRoF3f1p dia hoy izy:
Nosintomiko ny ISO 3 fa te-hametraka amin'ny usb amin'ny pc aho, mampiasa ubuntu aho ary manandrana mametraka azy amin'ny usb kingston DTSE9 miaraka amin'ny mpamorona disk boot, tsy manome valiny ahy izany, tsy miseho akory ao ny baotin'ny biosiko, dia ny iso, ny usb, ny pc ??
Valio amin'i AlejRoF3f1p
Mampiasà unetbootin 🙂
Nametraka an'i Debian 7 aho fa nesoriko teo no ho eo, ary mbola tsy afaka nampifandray Wi-Fi aho, ary solosaina finday tsy misy Wi-Fi ... mazava ho azy fa tsy xD
Fantatrao ve fa ny fonosana mitovy amin'ny ampiasainao hifehezana ny wifi anao ao amin'ny Ubuntu dia ao amin'ny trano firaketana an'i Debian Wheezy?
Mila mahafantatra fotsiny ny karatrao ianao 🙂
Ary ahoana no ahafantarako izay karatra ananako?
baiko lspci. mampiseho aminao ny mombamomba ny masininao izy io.
00: 00.0 Tetezana mpampiantrano: Intel Corporation Core Processor Core DRAM Controller (rev 02)
00: 02.0 VGA mifanitsy amin'ny Controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
00: 16.0 Controller Controller: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00: 1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset USB2 Contributor Host Enhanced (rev 05)
00: 1b.0 Fitaovana audio: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00: 1c.0 tetezana PCI: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00: 1c.1 tetezana PCI: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 05)
00: 1e.0 tetezana PCI: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
Tetezana 00: 1f.0 ISA: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00: 1f.6 Fanaraha-maso fanodinana signal: Intel Corporation 5 Series / 3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 05)
01: 00.0 Ethernet Controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
02: 00.0 Controller tambajotra: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b / g / n (rev 01)
FF: 00.0 Tetezana mpampiantrano: Intel Corporation Core Processor CorePath Architecture Generic Non-core Registr (rev 02)
ff: 00.1 tetezana mpampiantrano: Intel Corporation Core Processor CorePath Architecture System Address Decoder (rev 02)
ff: 02.0 Tetezana mpampiantrano: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 02)
ff: 02.1 Tetezana mpampiantrano: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 02)
ff: 02.2 Tetezana mpampiantrano: Voatahiry ny Intel Processor Core Processor (rev 02)
ff: 02.3 Tetezana mpampiantrano: Voatahiry ny Intel Processor Core Processor (rev 02)
Jereo fa io no azoko, inona izao no tsy maintsy apetraka na ataoko hahazoana manana wifi ao amin'ny Debian ????
Amin'ny zavatra apetrakao dia manana Broadcom BCM43225 802.11b / g / n wifi (rev 01) ny rafitrao. Ny mpamily hametraka ao amin'ny Debian dia: broadcom-sta-dkms
Voavaha ny olana 🙂
ny mpamily tokony hapetrakao dia firmware-brcm80211 http://wiki.debian.org/brcm80211 raha mila intaldor mitondra fimware tsy maimaim-poana ianao
Ity dia fametrahana harato maritrano marobe ka miasa amin'ny fametrahana 32-bit sy 64-bit ary mitondra ny mpamily firmware-brcm80211
fanazavana fanampiny http://www.esdebian.org/wiki/enlaces-directos-descargar-imagenes-iso-debian
vma1994 dia hoy izy:
Izaho dia eo amin'ny debian ary olom-baovao aho ary rehefa teo amina fizotry ny fametrahana debian dia tsy nampiasa karazana tambajotra (tariby na wifi) aho dia tsy afaka nifandray taty aoriana mba hamahana io olana io amin'ny fizotran'ny fametrahana dia nataoko tamin'ny fifandraisana tambajotra tamin'ny tariby hahafantarana ny karatra tambajotra ary taty aoriana raha afaka mampiasa ny wifi aho
Valiny amin'ny vma1994
Ary izany no antony anolorako hevitra hampidina ny DVD Debian iso: D .. Ny DVD dia manana mpamily, birao ary fiteny ary koa fandaharana mifantina tsara 🙂
Andramo ny iray amin'ireo isosa ireo ...
Misaotra Petercheco, satria tsara be hatrany ny fandraisanao anjara, mpankafy Slackware aho, fa izay linuxero manaja tena dia tsy maintsy manana DVD / CD Debian.
Valio Andriamatoa Linux.
Misaotra betsaka Andriamatoa Linux.,
Saika hanandrana Slackware aho: D.
firefox 7? Renin'andriamanitra!
Rehefa apetrako eo ambonin'ny marika Firefox ilay pointer dia maneho foana fa mampiasa Firefox 7 aho, tsy fantatro ny antony, fa Firefox 17 no tena ampiasaiko. Slackware dia manana mari-pahaizana mpandala ny nentin-drazana hametraka ny programa fa tsy dia be loatra, etsy ankilany tsy te-hanavao izany aho.
Samy Slackware sy Debian no mavesatra ao amin'ny distro Linux tranainy indrindra eto an-tany. Ankoatr'izay, izy roa no be mpitia indrindra amin'ireo izay tia distro tsara tsy maharesy azy ireo mihitsy (na dia voalohany aza dia mety ho somary sarotra ihany, saingy tsikelikely dia hita ireo toetra mampiavaka azy ireo).
Euclid dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa hanandrana, tokony ho 7 ity, manala ny birao ny Ubuntu, nametraka kubuntu aho, tiako be izany, nefa mihamangatsiaka ihany koa, raiki-pitia tamin'ny openuse aho, saingy misintona ilay rakitra ary, rehefa mirehitra ny DVD dia manome ahy hadisoana, noho izany dia nametraka aho, centos, raha vantany vao vita aho dia efa nampidirina ny wifi, tsy mitady vahaolana, ao amin'ny tamba-jotra, ny olana dia tsy afaka aho, ny fametrahana ireo repositories hafa dia manome ahy lesoka, fa ny lactop tsy niasa mihitsy, mitady tutorial hampiditra repositories ao amin'ny centos 6.4 koa aho. avelao ny fisintomana openuse hapetraka ao amin'ny net, raha tsara vintana aho, tutorial tsara, arahaba avy any Kolombia
Valiny tamin'i Euclid
Topazo maso ny lahatsoratro momba ny fomba handaminana ny CentOS:
Misaotra Peter, rehefa tonga ao an-trano ianao dia hovakiako amin'ny antsipiriany. satria faly amin'ny centos aho
Mampalahelo fa tsy afaka nandefa ilay rafitra aho. Rehefa namerina aho dia nahazo hadisoana grub, ary tsy nanana fomba hanamboarana azy aho, raha tsy tamin'ny fametrahana indray distro hafa. Ka amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Xubuntu aho.
Ny iso dia alaina amin'ny fomba tsy mety .. 🙂
Nojereko ny MD5 ary nifanaraka izany. Saingy tsy vao sambany aho no nitranga.
Tsy hanana UEFI ianao ???
Toy izany koa no mitranga amiko! Ny Kubuntu na ny Xubuntu ihany no azoko ampiasana azy
Tsia, tsy manana aho.
Ampiasao ny DVD satria raha nampiasa ny CD ianao dia alaina avy amin'ny internet ny fonosana rehetra miaraka amin'ny birao ary mety hisy lesoka eo amin'ny famindrana :).
Toy izany koa no mitranga amiko, na ny debian 7 na ny 6 amin'ny pentium taloha misy disk diska. Manomboka ny grub fa tsy mahita ny kapila. Namaha azy aho tamin'ny fametrahana lilo (amin'ny fomba haingana kokoa ny mandefa azy). Azo voafantina amin'ny faran'ny fametrahana ny manam-pahaizana. Ny lozisialy Grub dia mandeha ihany koa fa tsy maintsy manomboka ny pc amin'ny fanavotana na SuperGrubDisk aloha ianao ary apetaho avy eo
Manana Chip Mainboard PC voalohany miaraka amina chipset VIA aho, 4 Ghz Pentium 1.8 misy RAM 1 GB, horonan-tsary 32 MB ary kapila mafy 40 GB, samy IDE ary manana Debian Squeeze napetraka mihodina ara-dalàna aho.
Misintona ny Debian Wheezy DVD1 ISO aho mba hahafahako mametraka azy ao amin'ny Lentium 4-ko mba hanandramana miverina any amin'ny GNOME 3.4.
Vakio ny lesoka, ao dia milaza ny fomba hamahanao ny olan'ny fametrahana sasany.
Mampalahelo fa omaly fotsiny aho no nanana ny solosainako, ka tsy nanana fomba hahazoana SuperGrubDisk aho. Fa ny lesona dia ny manana azy io ho vonona hatrany.
Misaotra an'ity mpandray anjara ity rahalahy, nanosika ahy hametraka an'i Debian izy io ary io no fanapahan-kevitra tsara indrindra azoko raisina, arahaba.
Tongasoa ianao namana, faly aho fa nanampy anao ny lahatsoratro 😀
Notsapaina indray mandeha, naseho ahy tamin'ny namana iray ity distro ity, heveriko fa ny andiany faha-6 io, afaka nametraka azy tamin'ny installer graphique sy tamin'ny XFCE aho, saingy tsy afaka nametraka ireo fonosana hahazoana ny board Broadcom BCRM43XX miasa, ary raha te-hanadino azy aho dia tsy manana tariby ethernet ao an-trano hametraka ireo fonosana amin'ny Internet, ary tsy tadidiko ny fomba nanangonana azy ireo, ka amin'izao fotoana izao dia hifikitra amin'ny Ubuntu aho, na dia tsy manao izany aza aho tiko be.
Jereo raha misintona Debian DVD # 1 ianao ary misintona ireo fonosana:
voavaha ny olana satria ny DVD dia misy ny fiankinan-doha sisa :)
Ao amin'ity rohy manaraka ity
Ho hitanao ny sarin'ny debian wheezy live, izay misy firmware sy mpamily tsy andoavam-bola, izay amin'ny teôlôjia dia tokony hamela ny wifi hiasa.
Jxstbn dia hoy izy:
Tena tsara, nametraka azy fotsiny aho fa miaraka amin'ny XFCE ary miasa tsara, haingana be ary mafy orina. Ankehitriny dia ho vitako ny manamboatra azy 😀
Mamaly an'i Jxstbn
Faly aho 😀
Vao nametraka debian kde aho ary tena tsara dia tsara.
Debian 7 + KDE = ny tsara indrindra 😀
Manaiky tanteraka !!!
tena tsara ny atirculo anao !! misaotra amin'ny torohevitra.
Fitsapana ny mpampiasa
ricardoliz dia hoy izy:
Manana Debian Squeeze miaraka amin'ny LXDE mahazatra aho izao, saingy, efa manao fitsapana aho, miaraka amin'ny wheezy hananganana ny birao.
Ny olana voalohany hitako dia ny rindranasa gnome izay ampiasako ho brazier, gcaltool, ao anatin'ny tontolon'ny lxde-ko dia tsy naka ny lohahevitra gtk, gaga ianao fa tokony hametraka lohahevitra gtk3 ary safidinao tsy miankina izy ireo mba tsy ho ratsy tarehy loatra.
Efa nisy izany. fa ny olana lehibe dia manana bibikely ratsy tarehy i pcmanfm toy ny tsy fanavaozana ny atin'ny izay ao amin'ny reperitoan'ireo peniko amin'ny endrika matavy, raha toa kosa ka mandeha tsara ny thunar.
Mieritreritra aho fa nanomboka niasa nanangana birao hybrid hafa izahay tamin'ny xfce, lxde ary gnome vitsivitsy. Manomboka mahatsapa nostalgia be aho amin'ny gnome 2.3x, amin'ity dia afaka milaza isika fa tsara kokoa ny zava-drehetra taloha.
Manohy fitsapana hatrany izahay hahitana izay mivoaka.
Mamaly an'i ricardoliz
Hector Zelaya dia hoy izy:
Misintona ny kinova DVD Multiarch aho fa na inona na inona birao nofidiako dia apetrak'ilay gnome foana aho.
Valiny tamin'i Hector Zelaya
Raha mampiasa ny fombako ianao: lakile vidy ao amin'ny boot DVD ary ampio amin'ny faran'ny tsipika: desktop = kde na birao hafa: desktop = fxce na desktop = lxde dia tsy hanana olana ianao 🙂
Ary hianarana, boky tena atolotra:
Hita ihany koa amin'ny endrika hafa:
Misaotra anao izahay noho ny compa mpitari-dalana!
Amin'izao fotoana izao, hijery ny kinova Ubuntu vaovao aho, ho an'ireo Drivers sy PPA fotsiny, ary ho hitantsika ny fomba fanamboarako azy amin'ny Unity!
Debian aleo hojerentsika ny fotoana laniko handentehana anao!
ok ðŸ ™ ‚
Salama "RedHatero"! Ahoana no hataony amin'ny solosaina findaiko Lenovo? Tsy fantatrao ve ny fomba fiasan'i Debian amin'ny fahefana sns?
Izay ilay izy, miasa 10 ...
Vita, efa nesoriko izy io, fofona mossy be loatra, betsaka hamboarina .... satria nandao an'i Fedora aho (farafaharatsiny izao) ary nanomboka nampiasa Ubuntu dia lasa kamo be aho. Ary koa, satria SO dia masiaka, toy ny vatolampy Centos, koa arahabaina ireo mpampiasa Debian.
Raha fohy ny mpitari-dalana ahy miaraka amin'ny fikirakirana KDE 🙂
@petercheco Tsy miresaka momba ny mpitari-dalana no tokony hatao, apetrako miaraka amin'i Gnome amin'ny alàlan'ny fomba fametrahana DVD 1 avy amin'ny pendrive izay tsy fantatro ary vita amin'ny unetbootin, tena ilaina tokoa. Raha liana ianao dia vita toy izao:
1) Mihazakazaha unetbootin. Zava-dehibe: Mifandraisa amin'ny Internet.
2) Ery ambony, izy ireo dia mifidy ny fizarana, izay amin'ity tranga ity dia Debian, mazava ho azy.
3) Ao amin'ny drop-down eo ankavanana mifantina Stable_HdMedia (raha 32 izany) na raha 64, Stable HdMedia_64.
4) Eo amin'ny farany ambany, safidio, amin'ny karazany, USB Drive, ary eo akaikin'ny kapila. Avy eo OK.
5) Andraso minitra vitsy (fohy), fa ny unetbootin dia hisintona rakitra vitsivitsy mankany amin'ny pendrive.
6) Vantany vao vita, dia manidy unetbootin izy ireo ary mandika ny .iso amin'ny DVD 1 mankany amin'ny pendrive.
7) Atsangano indray ny rafitra avy amin'ny pendrive, ary avanti, hapetraka. Tsy hahita installer graphic super ianao, fa mora be sy mora ampiasaina.
Hey izao fa tadidiko .. Fa maninona ianao no nandao an'i Fedora ary nivadika ho Kubuntu?
Mampiasa Debian Wheezy miaraka amin'ny KDE aho ary rehefa tena mila fitoniana aho dia mitifitra ny CentOS 6.4 miaraka amin'ny repository kernel Elrepo ary ny kernel-lt amin'ny mpizara mba hifanaraka amin'ireo fitaovana vaovao azo antoka (kernel 3.0.77 ankehitriny) na kernel-ml napetraka ho an'ny kernel vao tsy ela akory izay eo amin'ny birao misy ahy na ny solosaina findainy (Amin'izao fotoana izao dia mandeha amin'ny 3.9.1).
Avelako ho anao ny rohy raha te hijery ianao: http://elrepo.org/linux/kernel/el6/
@petercheco Tsy miaraka amin'i Kubuntu aho, io no Ubuntu 13.04, ary andrana herinandro roa lasa izay ho rafitra tokana. Tamin'ny Centos dia nanana olana tamin'ny mpamaky karatra SD aho, bah, olana, tsy fantany akory izany; Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatry ny "hakamoana" amin'ny solosaina aho, izany no mahatonga ny Ubuntu 13.04, tsy mila mikasika na inona na inona mihitsy aho ary tena mety amiko izany; ary, mazava ho azy, miandry ny Centos 7. Fedora? Izy dia toy ny vadiko antitra, mitsidika azy foana aho ary mampatsiahy azy foana ny fitiavako azy ...
Ary manantena ihany koa aho ny CentOS 7, izay toa tsy ho ela intsony satria ny mpifaninana lehibe indrindra amin'i RHEL dia efa mihazakazaka miaraka amin'i Wheezy :). Na dia mihamatanjaka aza ny Ubuntu amin'ny mpizara araky ny asehon'ny sary:
@petercheco Rehefa misy kinova vaovao navoaka tao amin'ny sampana Stable of Debian, ny RTM dia manana bibikely farany farany. Tsara kokoa ny manomboka misintona azy ireo amin'ny fanavaozana 1 na 2, satria farafaharatsiny mba nanitsian'izy ireo lesoka farany (manomboka amin'ny fanavaozana 3 mandroso, ny fitoniana matetika dia mitovy na tsara kokoa noho ny an'ny CentOS).
Catusay dia hoy izy:
Salama, azafady amin'ilay fanontaniana, fantatro fa tsy io no toerana saingy tsy hitako ny valiny any an-kafa ary miantso an'ity fomba ity ho toy ny safidy farany aho. Manana olana aho amin'ny fanombohan'ny netbook-ko miaraka amin'i debian 7. Tsy te-hanitatra bebe kokoa ny tenako aho, azonao atao ny manondro ahy amin'ny toerana iray raha mamaly ahy ianao, satria ny irc tsy dia mifampiresaka loatra, misaotra.
Mamaly an'i Catusay
Eny, tsy miresaka momba ilay olana manokana ianao .. Raha zavatra hafa no ambaranay aminay, mety hanampy anao izahay 🙂
Tsy te-ho ratsy toetra aho, fa tsy fanitarana ve ny misintona ny DVD amin'ireo tontolo iainana raha toa ka hametraka iray fotsiny ianao? (Mpankafy fametrahana Net no miteny izay mampiasa azy na dia PC tsy misy fifandraisana Internet 😀)
Vaovao tsara, indrindra ny lohahevitr'ireo repository izay somary sarotiny foana ao Debian.
Tsy natao ho an'ny fahamendrehana na ho an'ny filana hafa izay anaovana ny kinova Debian DVD1, fa satria manana ny fandaharam-potoan'izy ireo toy ny foibe rindrambaiko izay mitovy amin'ny Ubuntu sy ny fampiharana tsy voatery atao toa ny FileZilla sy ny hafa, raha mbola manana hafainganam-pandeha amin'ny Internet ianao izay mampijaly ny fiainanao (512 Kbps, ohatra) ary ny hany safidinao dia ny mampidina azy io amin'ny alàlan'ny riandrano.
Raha ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 1 Mbps, dia azo atao kokoa ny misintona CD1 na Netinstall fotsiny, satria ny fahamendrehan'ny angon-drakitra dia manamarina ny tsy hiankinan-doha amin'ny safidy any ivelany.
Mazava ho azy, raha misy DVD, natao ho an'ny zavatra izany ary tsy laviko fa tena ilaina tokoa izy ireo, indrindra amin'ny hafainganam-pandeha na amin'ny offline. Mihoatra ny indray mandeha aho no nieritreritra ny hiala tamin'izy rehetra izay heveriko fa 8 (mihodina mankany amin'ny iray hafa aho, ha).
Saingy manana fisalasalana aho, na dia ampidininao ao anaty DVD1 manontolo aza izany, tsy hisy olana ihany koa ve ny fiankinan-doha amin'ny programa lehibe hafa, sa io DVD io ihany no ampy hanatanterahana izany? (Ny programa toa ny browser fotsiny no resahiko sns izay entin'io DVD io)
Tsy misy olana amin'ny rindranasa toa ny mpitety tranonkala, satria tonga amin'ny DVD1 ireo programa tena ilaina, toy ny mpizaha tany sasany toy ny Iceweasel 10 ESR, ny mpanjifa mailaka, ny birao fiasan'ny birao LibreOffice 3.5 ary raha eo amin'ny GNOME ianao dia manana ny Ivotoerana Software ao aminao Faha-5. kinova (miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Cannonical ary miasa fahagagana amin'ny birao hafa toa ny KDE, XFCE ary LXDE).
Ho fanampin'izay, ny DVD1 dia manana ny interface desktop manontolo toa ny GNOME 3.4 ary tsy mila misintona ny CD / DVD manana GNOME ianao, iray hafa manana KDE sns (Debian tsy Ubuntu, mazava ho azy), miampy ny iray tonga ianao noho ny fitaovana fanampiny hafa toy ny VLC, Amarok (ho an'ny KDE), ankoatry ny hafa.
Eny tokoa, eo amin'ny toerana onenako dia manana fifandraisana 512 kbps aho, ary raha mila zavatra lehibe aho dia aleoko misintona azy avy amin'ny uni, izay misy fifandraisana 1000 Mbps ao.
Salama! mandray fiarahabana mafana! Farany Wheezy tranon'omby! vaovao mahafaly inona re! Niaraka tamin'i Debian aho nandritra ny 1 taona latsaka ary indraindray dia apetrako avy hatrany am-boalohany ny rafitra, azo antoka fa haveriko indray izany! Nampiasa ny kinova DVD foana aho, ny DVD1 fotsiny izay mitondra fonosana ilaina hametrahana birao, na izany aza (heveriko) fa eo amin'ny efijery "safidy nandroso" no safidy hametrahana tontolo birao hafa, raha te-hametraka ianao kde, lxde na xfce, ity safidy ity dia misy ihany koa ho an'ny netinstall iso izay ilay nampiasako tato ho ato, mila misafidy ny tahiry na fitaratra fotsiny ianao avy aiza no hahazoantsika ireo fonosana! Safidy iray hafa ny fametrahana ny "base system" fotsiny ary avereno ary avy amin'ny console dia apetaho ny "task" debian ho toy ny kde task na debian task, ao amin'ny repositories misy azy ireo, ary farany azontsika apetraka ny xdg-user packages -dirs mamorona lahatahiry ao amin'ny lahatahiry / an-trano / »solonanarana», ireto dia fampidinana, antontan-taratasy, horonan-tsary, sary, ankoatry ny hafa, ankoatry ny fanesorana ny fonosana menu-xdg izay napetraka, satria ao amin'ny mpandefa kde, aseho ny fampiharana 2 fotoana! Misaotra anao indrindra! Salama!
Salama… ampidino ny cd amin'ny xfce… ity torolàlana ity dia ho an'ny kde… azonao omena ahy ve izay kopiko ao amin'ny terminal fa ho an'ny tontolo iainako… misaotra
Momba ny repositories sy ny fanavaozana ny rafitra dia mitovy.
apt-get install iceweasel iceweasel-l10n-en-es icedtea-plugin flashplayer-mozilla vlc icedove icedove-l10n-en-es gufw brazier k3b kde-l10n-es rar zip unzip unrar p7zip devede libreoffice libreoffice-gtk libreoffice-l10n libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libreoffice-lXNUMXn libre lXNUMXn gimp gdebi gcalctool network-manager-gnome
Amin'izay dia hiasa ny debian xfce .. Tsy te hofenoina zavatra tsy hampiasaiko aho, satria ao an-trano ny ekipo. misaotra
Zava-dehibe amin'ny fampiasana ankapobeny izy io nefa tsy mameno azy amin'ny rindranasa izay tsy ampiasainao matetika 🙂
Salama, nametraka debian 7 aho fa tsy mitondra ny birao GNOME misy anao, mijanona eo amin'ny rindrina ary raha misafidy ny gnome mahazatra aho raha mitondra ahy dia inona no olana ???. Misaotra
Manome ahy izany fa ny olanao dia misy ifandraisany amin'ny karatra misy anao .. Io dia mamela ny hafainganam-pandeha 3d na tsia .. Raha tsy izany dia tsy afaka mampiasa afa-tsy gnome-klasika ianao na afaka mandinika ny tontolo iainana xfce na lxde.
Nahavita ny zava-drehetra aho ary mbola tsy afaka mifandray amin'ny Wi-Fi amin'ny Debian! : S
Efa nolazaiko taminao indray mandeha .. Ampidiro ny fonosana broadcom-sta-dkms ary tokony hiasa aminao izy satria mifanaraka amin'ny carte de wifi anao .. Tsy afaka mandeha aminao izany 🙂
Ary ahoana no hametrahako izany fonosana izany? ny napetrako dia firmware-brcm80211 fa tsy misy!
Ovao ny repository araka ny voalaza ao amin'ny paositra ary tohizo miaraka amin'ny:
ampidiro ny tenimiafinao superuser
apt-mahazo mametraka broadcom-sta-dkms
Atsaharo indray ary hanana wifi ianao 🙂
Misaotra, hiezaka ny hahita ..
Azoko ity hafatra ity:
E: Tsy hita ilay fonosana broadcom-sta-dkms
Mieritreritra aho fa hiala amin'i Debian, toa tsy mifanaraka amiko io!
@ayosinho: Izany dia satria tsy anananao ny repositories nampidirina araka ny fanazavan'i @petercheco ao amin'ilay lahatsoratra. Ampio izy ireo dia ho hitanao izany raha apetraka.
Ry tompokolahy, ahoana ny fandehantsika? Tsy haiko raha tokony hanontany eto ianareo fa tsy haiko hoe (amin'izao fotoana izao) ny zava-mitranga dia manandrana mametraka dns amin'ny debian aho "hatreto tsara", dia manokatra ny console aho , midira ho mpampiasa faka, ary omeo apt-get install bind9 na aptitude install bind9 sy ooh !!! Mahagaga fa tsy ny fonosana dns ho an'i debian izany ary tiako ho fantatra raha efa nanomboka nametraka serivisy tamin'ity monster distro ity ny olona iray, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao ary raha tianao ary afaka mandefa mailaka any wili920503@gmail.com miaraka amin'ny fanampiana, misaotra anao nanokana fotoana hamakiana ity: D.
Makà tuto mahafinaritra hazavaina tsara 🙂
Vaovao amin'i Debian dia hoy izy:
Ahoana no fomba ahazoako ny adaptatera wifi haka ahy, usb TL-WN321G io. Ao amin'ny andohalambo dia heveriko fa ny module rt2500usb dia napetraka na zavatra toy izany.
Valiny vaovao amin'i Debian
apt-mahazo mametraka firmware-ralink
Vahaolana indray ary voavaha ny olana 🙂
Miala tsiny fa tsy manana internet aho. Avy am-baravarankely ihany no azoko sintomina.
Miala tsiny fa tsy manana internet tariby aho. Mampihomehy fa amin'ny ArchLinux sy Gentoo dia tsy misy izany. Tsy lazaina intsony ao amin'ny Ubuntu. Tokony alaiko ilay fonosana miampy ny fiankinan-doha aminy, miampy ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha. : p be debian.
Tsy nanala hevitra momba anao aho. Ny vavahady desdelinux.net tato ho ato dia nanana olana tamin'ny fanehoan-kevitra, fa andao atao izany.
1 ° Sintomy ny Debian DVD1 ary avelao ao amin'ny loharanom-pahalalana mavitrika anao ny lisitra cd / dvd.
2 ° Sintomy ny fonosana ho an'ny wifi anao ary apetaho .. Ny fiankinan-doha dia nalaina tao amin'ny DVD:
Luks dia hoy izy:
Nametraka fanontaniana manodidina ahy eto aho momba ny fametrahana azy. Namafa ny fanontaniana izy ireo, tsara ny mahafantatra hoe iza no ao anaty rindrambaiko maimaimpoana. Miarahaba.
Valiny tamin'i Luks
Raha azonao atao ny mandefa ny fanontaniana indray na mandefa ahy amin'ny mailaka: petercheco@hotmail.es
Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra!
Tongasoa ianao 😀
Mandritra ny fanombohana, inona no fampiasana ny "Miandry / hipetraka feno"?
Salama, inona ny sary amd64 dvd izay misy interface graphique ho an'ny fametrahana azy?
Ny DVD rehetra dia manana sehatr'asa fametrahana sary sy tontolo manodidina ny birao rehetra misy ny fiteny 🙂
milanja12 dia hoy izy:
Salama .. omeo ahy ny rohy misy ny sary na ny falehan-driaka hampidinana ilay misy ny interface graphique eo am-pametrahana? misaotra !!
Valiny amin'ny pesa12
Misaotra, nifangaro tamin'ny sary mivantana aho, izany no tsy nipoitra ilay installer graphique, saingy amin'ny farany dia mitovy ..
Ireo sary ireo dia efa manana ny installer graphique, safidio fotsiny ny "Graphical Install"
Salama petercheco eto indray aho, avy any amin'ny centos mankany debian 7 wheezy tiako kokoa i debian sy ny toerana anaovany azy, mila fanampiana fotsiny aho amin'ny wifi ny karako dia ity, root @ debian: / home / euclides # lspci
Tetezana mpampiantrano 00: 00.0: Intel Corporation Mobile 945GM / PM / GMS, 943 / 940GML ary 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
00: 02.0 VGA mifanitsy amin'ny Controller: Intel Corporation Mobile 945GM / GMS, 943 / 940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00: 02.1 Display Controller: Intel Corporation Mobile 945GM / GMS / GME, 943 / 940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00: 1b.0 Fitaovana audio: Controller Audio Intel Definition NM10 / ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00: 1c.0 tetezana PCI: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00: 1c.1 tetezana PCI: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00: 1c.2 tetezana PCI: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family PCI Express Port 3 (rev 01)
00: 1d.0 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family USB UHCI Controller # 1 (rev 01)
00: 1d.1 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family USB UHCI Controller # 2 (rev 01)
00: 1d.2 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family USB UHCI Controller # 3 (rev 01)
00: 1d.3 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family USB UHCI Controller # 4 (rev 01)
00: 1d.7 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00: 1e.0 tetezana PCI: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e1)
Tetezana IS: 00f: 1f.0: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
00: 1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00: 1f.2 SATA Controller: Intel Corporation 82801GBM / GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [maody AHCI] (rev 01)
06: 00.0 Controller tambajotra: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b / g WLAN (rev 01)
08: 08.0 Ethernet Controller: Intel Corporation PRO / 100 VE Network Connection (rev 01)
root @ debian: / home / euclides # ampidino ny fonosana sasany izay narosonao tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony fa tsy haiko ny mametraka azy ireo. raha miasa amiko ny wifi dia tena tsara ity debian ity. tiako izany, ny fepetra fotsiny ihany wifi, arahaba ary misaotra tamin'ny fandraisana anjara sy ity serivisy lehibe omenao ny fiarahamonina ity
Salama cractoh :),
raha nampidina ireo fonosana ianao:
ny hany mila ataonao dia ny terminal sy karazana misokatra:
Raha ny lojika, raha manana internet tariby ianao dia tsy mila maka ireo fonosana ireo ary afaka mametraka azy ireo amin'ny Internet mifandray amin'ny:
fanavaozana apt-get && apt-get -y hametrahana broadcom-sta-dkms
Atsaharo ny PC avy eo.
Misaotra Peter, rehefa tonga any an-trano aho dia hanao ny fizotrany, arahaba,
Salama petercheco, manana ny dingana rehetra avy etsy ambony aho, havaozy ny repo rehetra fa tsy misy ataoko ny dingana mifandraika amin'ny tamba-jotra nefa tsy hitany ilay rakitra, efa tara be rahampitso rahampitso, tsy fantatro izay tsy mety ataoko cd / home / euclides / downloads dpkg- idkms_2.2.3-1.2_all.deb dpkg-ibroadcom-sta-dkms_5.100.82.112-8_all.deb
Andao hojerentsika, izay tokony hataonao dia ny manokatra ny terminal ary manoratra:
cd / trano / kininina / fisintomana
Raha ny filazako azy dia mandeha.
Raha tsy manana fampirimana fampidinana ao an-tranonao ianao dia azonao atao ny manokatra ny mpitantana ny rakitra, mankanesa any amin'ny toerana nampidinana ireo fonosana ary tsindrio ny bokotra ankavanan'ny totozy ary safidio ny "terminal misokatra eto".
Salama petercheco arahaba, izao dia milaza amiko fa manana ilay rakitra tapaka aho dia manandrana mamafa azy ary miverina ary hita
(gksudo: 3692): GConf-WARNING **: Tsy nifandray tamin'ny D-BUS daemon ny mpanjifa:
Tsy nahazo valiny. Ny antony mety misy dia ny: ny rindranasa lavitra dia tsy nandefa valiny, ny politikan'ny fiarovana ny bus dia nanakana ny valiny, tapitra ny ora fiasana, na tapaka ny fifandraisana.
Tsy nahomby ny GConf: Tsy mandeha ny daemon D-Bus
Jereo, satria mampiasa Gnome install gdebi ianao .. hita amin'ny DVD Debian izany na alainao avy amin'ny:
Ampidiro ny gdebi amin'ny:
Raha vantany vao tafapetraka ireo fonosana ireo dia azonao atao ny mihazakazaka ny fametrahana fonosana .deb amin'ny tsindry indroa na amin'ny fipihana ny bokotra totozy ankavanana ary misafidy misokatra amin'ny gdebi.
Highlander dia hoy izy:
Salama PeterCheco, manao ahoana ianao, voalohany indrindra misaotra ny lahatsoratra ary miarahaba anao noho ny fandraisana anjara rehetra omenao anay vaovao, nanana olana aho rehefa te hametraka an'i Debian KDE avy amin'ny CD tao amin'ny Server, tsy nahafantatra ahy mihitsy ilay tambajotra. , horonan-tsary sy feo ary rehefa nametraka azy tamin'ny DVD aho raha nahafantatra azy ireo, saingy olon-tiako KDE aho (amin'ny PC ampiasaiko mampiasa Kubuntu) ary raha tsy mamaky ny lahatsoratrao aho dia tsy haiko izay mety hitranga amiko, apetrako izao dieny izao dia antenaiko fa amin'ny farany manomboka ny fametrahana dia vita tsara daholo ...
Te-hanontany anao zavatra tsy haiko aho raha hisy izany, tao amin'ny CentOS ihany no nahitako azy, te-hametraka, hanamboatra ary hampiasa Bacula amin'ity mpizara ity aho miaraka amin'i Debian mba hanao backup voaomana amin'ny PC ao amin'ny LINUX sy Windows izay dia ao amin'ny tambajotranoko, amin'ireo programa rehetra ho an'ny backup afaka ampiasaina amin'ny LINUX sy Windows izay novakiako fa iray amin'ireo tsara indrindra izany, nahita horonan-tsary fametrahana aho fa ho an'ny Server CentOS araka ny nolazaiko dia nisy namana nijanona mba hitady. raha nisy izy ireo ho an'i Debian, saingy nitady aho nahita ity pejy ity dia novakiako ny fomba fametrahana ny tontolo Debian KDE ary amin'ny fahalianana hahafantatra raha fantatrao izany, satria hitako fa manam-pahalalana momba an'i Debian ianao, tsy fantatro raha azonao atao ny manampy ahy amin'ity lafiny ity, feno fankasitrahana aho.
Misaotra mialoha, tandremo ny tenanao sy ny fahombiazanao amin'ny adidinao isan'andro ...
Mamaly an'i Highlander
Misaotra betsaka tamin'ny hevitrao sy ny fangatahanao: D.
Ny fonosana Bacula dia misy ao amin'ny Debian tonga lafatra ary afaka mahita torolàlana fametrahana tsara eto ianao:
Ara-dalàna aza adino ny mametraka MySQL: D.
Aorian'ny fampifanarahana dia mitovy amin'ny ao amin'ny CentOS: D.
OK misaotra betsaka, misy fanontaniana na fanehoan-kevitra hafa tsy hisalasala aho mangataka ny toro-hevitrao, manantena foana ny hahazo ny fanampianao ... tandremo
Eto ianao dia feno iray manontolo:
Hey, misaotra betsaka, hanomboka hamaky, hametraka ary hizaha toetra azy aho hahitako izay fandehany ... tandremo
Misaotra anao. Nanompo ahy tsara izy io.
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona. Mijery sary iza aho no halefa, mampitahako ny birao jiro Xfce na LXDE, misy afaka miteny amiko ve izay tolo-kevitrao? Mikasika ny Debian 7 dia hitako fa ny Gimp dia miaraka amin'ilay farany fa maninona no tsy miaraka amin'ny LibreOffice 4 nefa efa nanambara ny famoahana 4.1 ho avy izy ireo?
Salama ary tongasoa ianao: D.
Mikasika ny tontolo iainana, aleoko mampiasa XFCE mihoatra ny LXDE. Libreoffice dia azo sintonina avy amin'ny pejy ofisialy amin'ny endrika .deb ary apetraka miaraka amin'ny dpkg-aho libreoffice * izay hita ao amin'ny terminal ao amin'ny folder fampidinana .. izany hoe: cd / home / your_user_name / Downloads
Misaotra betsaka anao Peter, hitako fa hadino ny LXDE ary manohy manavao ny Xfce ary amin'ny zavatra novakiako teto dia mitondra fanatsarana tsara. Mikasika ny fametrahana dia hiezaka aho araka ny voalazanao satria efa nampiasa apt-get foana aho fa azoko fa satria ny LibreOffice farany dia tsy ao amin'ny trano fitehirizana, noho izany ny vahaolana dia ny misintona ny .deb. Misaotra betsaka anao vady!
Krlos dia hoy izy:
Tokony ho tiako be izy ireo saingy indrisy fa tsy nahavita nanao ilay drafitra izay tena ilaina aho mba hiasa tsara.
Valiny tamin'i Krlos
curuxiera dia hoy izy:
Mijery aho fa tsy mahita: Fa maninona no tsy tonga amin'ny AMD ihany ilay birao Gnome 64-bit? Toy izany koa ny fizarana rehetra.
Mamaly an'i curuxiera
Mitovy ihany izany: D. Ampidino ny kinova amd64 ...
Ny ankamaroan'ny vakiana amin'ny Andao hampiasa Linux: Aprily 2013
Firefox OS Simulator 3 misy